दहि चिउरा किन खाने ? – Rajmarg Online
दहि चिउरा किन खाने ?
घोराही, असार १५ । १५ असारमा दही चिउरा, १५ साउनमा खिर,जनै पूर्णिमामा क्वाँटी, माघेसंक्रान्तिमा तरुल, घिउ, चाकु,शिवरात्रिमा गाँजा खाने हामी नेपालीहरुको परम्परा नै हो । प्रत्येक सम्वत्सरको आषाढ १५ मा नेपाली समाजमा खेतको हिलोमा टेक्ने र रोपाईं गरी दही चिउरा खाने परम्परा छ । अन्य पेसा र व्यवसायमा रहेका नेपालीले पनि दही चिउरा खाने गर्दछन् । हाम्रा विभिन्न चाड पर्वको फरक फरक मूल्य र मान्यता भएपनि चाडका दिन खाने परिकारको पनि विशेष महत्व रहेको हुन्छ ।
संस्कृतमा दहिलाई दधि भनिन्छ । चिउरालाई भने शुष्कोदन भन्ने गरिन्छ । हाम्रो नेपाली समाजमा असार १५ मा दहि चिउरा खाने गरिन्छ । हाम्रो संस्कृतिमा आषाढ १५ लाई वर्षदिनभरिका चाडपर्वको द्वार पनि भन्ने गरिन्छ ।
। त्यै भएर पनि प्रत्येक असार १५ मा शुभ साइत सम्झेर दहि चिउरा खाने गरिन्छ । संस्कृतिविद्हरुका अनुसार धानखेतीको प्रारम्भ भएसँगै असारमा चिसो आलीको डिलमा बसेर रोपाईको काम सकिएपछि दहि चिउरा खाने गरिएको र पछिल्ला समय यो परम्परा परिष्कृत हुँदै रोपाईमा मात्रै नभई घरघरमा खाने चलन चलेको हो ।
दहीमा चिउरा मिसाएर खाँदा कार्बोहाइड्रेड, प्रोटिन, क्याल्सियम, पोटासियम र भिटामिन पर्याप्त मात्रामा प्राप्त गर्न सकिन्छ । दही र चिउराले हाम्रो शरीरमा फाइदा पनि पुर्याउँछ । दहीमा प्रोबायोटिक्स पाइन्छ जसले गर्दा हाम्रो पेटको स्वास्थ्यलाई निक्कै नै फाइदा गर्छ । हाम्रा पुर्खाले असार १५ मा दही चिउरा खान ल्याएको प्रचलनलाई वैज्ञानिक रुपमा पनि सान्दर्भिक समेत छ ।
दहीमा प्रचुर मात्रामा क्याल्सियम, सोडियम, पोटासियम, भिटामिन ए, डी, बी–१२ जस्ता तत्व पाइन्छन् । जसको सेवन गर्दा पाचन क्रियालाई सहयोग पुर्याउँछ । दहीले कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई पनि नियन्त्रणमा राख्दछ । दहीमा क्याल्सियम र फोस्फरसको मात्रा अत्यधिक हुने भएकाले यसले दाँत र हड्डीलाई बलियो बनाउँछ । दहीमा जिंक, भिटामिन ई, फस्फरोसजस्ता मिनरल्स पाइने भएकाले यसले छालालाई जवान राख्छ ।दहीमा पाइने क्याल्सियमले शरीरमा कार्टिसोलको सन्तुलन गर्छ र मोटोपना, हाइपरटेन्सन र कोलेस्ट्रोल घटाउन मद्दत गर्दछ । दहीको सेवनले दिमागलाई शान्त बनाउँछ जसले गर्दा भावना र पीडालाई नियन्त्रण गर्दछ ।
चिउरामा भिटामिन ए, सि, क्याल्सिम र आइरनको प्रचुर मात्रा पाइन्छ । चिउरा चिल्लोपदार्थ र ल्याकटोस नहुने भएकाले मुटुका लागि निकै राम्रो मानिन्छ । चिउरामा आइरन,भिटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन तत्व रहेको हुन्छ । चिउरामा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा धेरै हुने भएकाले शरीरमा ऊर्जाको स्तरलाई कायम राख्न सहयोग गर्दछ । मधुमेहका रोगीले चिउराको सेवन गर्दा धेरै बेरसम्म भोक नलाग्ने र रगतमा सुगरको संचार ढिलो गराउँछ ।
हाम्रो संस्कृतिमा पनि दहीको स्थान महत्वपूर्ण रहेको छ । शुभकार्यका लागि कुनैपनि महत्वपूर्ण काम गर्नुअघि दही खाने र दहिमा अक्षता मुछेर निधारमा रातो टीका लगाउने परम्परा रहेको छ । नेवारी परम्परामा चिउरालाई पनि शुभ सकुन र सगुनको रुपमा लिइन्छ । गुरु गोरखनाथले नेपालको एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि दही खान दिएका थिए भन्ने किंबदन्ती समेत रहेको छ ।
सिन्धुपाल्चोक बाढी पहिरो : दाङका एक इन्जिनियर वेपत्ता